Isi-Italian usapho ekuthatheni Venice, Italy ufunzele ukuze kubekho inkqubela okanye boy s ngesingesi ukunceda thina kunye zethu boys - IVIDIYO INCOKO - ubomi Dating - live streams!
Isi-Italian usapho ekuthatheni Venice, Italy ufunzele ukuze kubekho inkqubela okanye boy s ngesingesi ukunceda thina kunye zethu boys
OLANDELAYO UKUFUMANEKA UKUSUSELA NGOSEPTEMBA Bonke
Ndinguye Simona kwaye umyeni wam ingaba Gaetano sisebenzisa kunye young kwaye fun (ndicinga) kwaye kufuneka isibini beautiful boys, Michael kwaye Nicholas iphelelwe kunyeMna umsebenzi kwi supermarket njenge-shop druid kwaye kwi bar kakhulu, umyeni wam ngu kwi-Italian Zezulu Umkhosi. Sifumana isinye cat (Diego) kwaye OMKHULU omnyama rescue puppy, ngokuba Sebastian. Thina ve kokuba ezininzi dibanisa workwear amava, baya kuba bonke njengobawo usapho kwaye baya yithi rhoqo kuza ndwendwela kwethu. Thina cinga ngokwethu ukuba sithande, esebenzayo kwaye andwebileyo usapho kwaye bethu ababini boys ngokuqinisekileyo uya kuyigcina kuwe ngomhla iinyawo zakho, mna isithembiso uza zange abe okruqukileyo. Ukuba ufuna cinga kuthi, thina ungathanda ukuba athabathe olu seriously kwaye baziphatha ngayo njengoko naliphi na umsebenzi kodwa kanjalo siphathe oku njengo-a ubomi amava apho unako kuhlangana abantu abatsha, kusenokwenzeka ukuba bafunde omtsha ulwimi kunye nokufumanisa indlela entsha yokuphila. Sifuna umntu olilungu fun, sithande kwaye esinenkathalo abo baya kuvuma ingoma kwaye umdaniso (kakubi) kunye nam) kwaye ndiya kuyigcina boys entertained.
Thina musa t yamkela esifutshane hlala
Thina ll kufuneka uyakwazi ukukhetha kwabo phezulu ukusuka esikolweni, njl-njl. Thina musa t nje ufuna umntu emsebenzini kuba nathi, sifuna umntu ukuba abe yinxalenye yosapho lwethu, omkhulu udade okanye umzalwana kuba boys. Sisebenzisa ujonge ukuze kubekho inkqubela okanye boy ngubani umama ulwimi ngu isixhosa njengokuba nathi umnqweno wethu ababini abantwana babe ngokupheleleyo ooduladula -lingual. Zombini boys kuthetha incredibly okulungileyo isixhosa kodwa ngoku sikulungele neyokusebenza kwaye nokugcina perfecting zabo nako. Thina ungathanda ukuba babafundise isixhosa yi-ukudlala imidlalo, puzzles, kokuya kwi-park njalo-njalo. Kum kwaye umyeni wam unako ukuthetha isingesi kakuhle kakhulu, ngoko ke akuyi kuya kuba akukho mfuneko kuwe ukufunda isi-Italian, ngaphandle kokuba ubufuna. Uza kusoloko kufuneka kwiintsuku ezimbini ngaphandle ngeveki.(Mgqibelo-icawe), Ngexa ufaka apha, sifuna ungathanda ukuba uncedo ngomgca kancinci housework, nto ezinzima, nje izinto ngathi hovering, ukuchitha - dishwasher, sweeping nezinye eqhelekileyo indlu imisebenzi. Thina musa t kuba imigaqo kwi ngubani ixesha ufumane ekhaya ebusuku okanye ukuba ufuna ukuhlala ngaphandle kwaye kuza emva elandelayo mini, nangona kunjalo, siya ungathanda ukuba sixelele xa sihamba ngaphandle. Thina ungathanda ukuba wonwabe kodwa ufuna ukugcina kuwe ekhuselekileyo sithanda uthando ngayo ukuba yintoni i-avokhado, kunye nathi kwaye wachitha ixesha kunye nathi njengokuba sifuna ukuba babe nokuva inxalenye usapho, kodwa, kunjalo oku isn t compulsory. Siphila ngendlela ezintathu levelled indlu kwi phezulu floor ingaba bedrooms kwaye omnye bathroom uza kuba eyakho bedroom nge hae, i-tv, incwadi shelf, wardrobe kwaye ekhabhathini. Kwi eliphakathi floor sinawo lounge ukuba kukhokelela the name enye bathroom. Ongezantsi umgangatho sino omnye ehleli indawo, bathroom enye name. The bathroom downstairs kanjalo ubani shawari ukuba uyakwazi kuba njengoko eyakho ukuba ukhetha. I ariya apho siphila ubizwa ngokuba Pease, seliza Treviso. Nje imizuzu ukuba Venice yi-ukuqeqesha. Kwi-Pease kukho ilanlekile ka-iinkwenkwezi kwaye café ke, siya kuba kwiposi kwaye supermarkets zonke ngaphakathi ehamba umgama. Ungasebenzisa bike kwaye ride bangena bobabini Pease umbindi okanye ukuvala yi-ezinemigodi. Kukho i-Italian iklasi kwi-Treviso kwi-mornings apho ungaya kabini ngeveki,(ebusika ngamaxesha) siza kuba ndonwabe ukuhlawulela ukuba abekho. Wangaphambili au iipere struggled ngenxa yokuba kufunyenwe kube nzima ukuba zithungelana kunye utitshala njengoko yena asikwazanga ukuthetha isingesi, nangona kunjalo, wonke umntu ke ezahlukeneyo yayo s kukunceda kakhulu a zama ukuba ukhe ubene anomdla.
हैलाब डेटिङ साइट, एक मुक्त डेटिङ साइट
fun ubhaliso phones photo bukela ividiyo familiarity umfanekiso Dating ubhaliso watshata umfazi ukuhlangabezana ads iwebhusayithi ividiyo Dating-intanethi apho kuhlangana a kubekho inkqubela free Chatroulette Dating ngaphandle iifoto i-intanethi incoko roulette ubhaliso Dating abafazi